Miarahaba antsika rehetra, miverina indray izahay miaraka amin'ny fampiharana Android mahagaga hafa antsoina hoe Caxo. Io no Video Player sy Editor farany indrindra, izay manolotra ny hilalao ny endrika horonan-tsary rehetra, mandefa horonan-tsary amin'ny Smart TV amin'ny alàlan'ny fitaovana Android-nao, ary endri-javatra maro hafa.
Araka ny fantatrao dia be dia be ny fampiharana Android eny an-tsena, izay milaza fa manolotra endri-javatra sy serivisy mitovy. Saingy matetika, tsy maintsy mandoa vola ianao raha te hidirana amin'ireo karazana fampiharana ireo. Ny fampiharana kinova maimaim-poana dia manome pop-up sy doka tsy ilaina, izay mahasosotra.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa Android mahagaga ity, izay manolotra anao hiditra amin'ireo serivisy ireo ary betsaka kokoa maimaim-poana. Tsy mila mandoa denaria tokana ianao raha te hampiasa serivisy ary tsy manome doka na pop-up koa izany. Izy io dia fampiharana maimaim-poana, miaraka amin'ireo fiasa tsara indrindra.
Azonao atao ny milalao horonantsary amin'ny Full HD na amin'ny fampisehoana 4K sy ny maro hafa. Betsaka ny endri-javatra an'ity fampiharana ity, azonao idirana. Raha manana olana amin'ny fampiasana ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Hamaha ny olanao rehetra izahay, koa aza misalasala mifandray aminay.
Topimaso momba an'i Caxo
Izy io dia fampiharana Android maimaim-poana, izay novolavolain'i Millo Softech. Izy io dia fitaovana famerenan-dahatsary matihanina, izay manohana ny filalaovana horonan-tsary amin'ny endrika rehetra manomboka amin'ny mp3 ka hatramin'ny Ultra HD amin'ny fitaovana Android anao. Izy io koa dia manolotra Video hidin-trano, izay ahafahanao manidy ny haino aman-jery manokana spritely.
Caxo App dia manolotra Chromecast ihany koa, izay ahafahanao mijery ny haino aman-jery rehetra amin'ny Smart TV. Izany no fomba tsara indrindra, izay ahafahanao mampifandray ny Android TV sy Smartphone, ary avy eo dia afaka mijery ny horonan-tsary rehetra amin'ny Smartphone amin'ny fahitalavitra.
Movie App dia iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ity fampiharana ity. Izy io koa dia manome anao hifehy ny hafainganam-pandehan'ny playback HP. Azonao atao ny mamela sy mampiasa ny fanaraha-maso ny hetsika, izay handehanan'ny fampiratiana miadana sy haingana araka ny fandrindranao. Amin'ity app ity dia afaka mihaino feo video ianao ao ambadika.
Manolotra anao koa izy hilalao horonantsary ao ambadika, izay ahafahanao mamita asa marobe mandritra ny fihainoana. Azonao atao koa ny manova azy io ary mampiasa azy io ho toy ny efijery mitsingevana. Hiseho eo an-tampon'ny fisehoanao izy io, izay ahafahanao mijery horonantsary sy miditra amin'ny rindranasa hafa koa.
Misy serivisy fanampiny an-taonina amin'ity fampiharana ity, izay azonao idirana. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka mampiasa azy. Raha manana olana amin'ny fidirana amin'ny rindrambaiko ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Anaran'ny fonosana solut.techworldsolution.caxo
Araka ny efa niresaka momba ny sasany amin'ireo fiasa lehibe an'ity rindranasa ity miaraka aminao rehetra ao amin'ilay faritra etsy ambony, saingy misy mihoatra noho izay mety ho hitanao. Ao amin'ny fizarana etsy ambany dia hizara ny lisitry ny fiasa lehibe aminareo rehetra izahay.
Valin'ny haino aman-jery
Misy ny safidy Chromecast
Alefaso horonan-tsary ao ambadika
Tohano ny karazana endrika video rehetra
Azo zahana ny Subtitle Downloader
Raha te-hisintona ny Caxo Apk dia azonao atao ny mitsidika an'i Google na maka azy eto amin'ity pejy ity. Raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana. Ny bokotra fampidinana dia eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Caxo no mpilalao horonantsary tsara indrindra, izay manome fampiasa an-taonina maimaimpoana. Tsy mila mandoa denaria tokana ianao raha te hiditra amin'ireo serivisy ireo. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary manomboka mampiasa serivisy maimaimpoana.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Caxo, Caxo Apk, Caxo App, Movie App Post Fikarohana